Hetsika sosialim-bahoaka :: Naato vonjimaika ny fizaràna fanampiana eto Analamanga • AoRaha
Nanapa-kevitra amin’ny fampiatoana vonjaimika ny fizarana an’ireo fanampiana ny marefo sy very fidiram-bola eto Analamanga ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao ny fanjakana. Hiverina raha afaka efatra na dimy andro indray ny fitsinjarana an’ireo sosialimbahoaka, toy ny Vatsy Tsinjo sy ny Tosika Fameno, saingy miaraka amin’ny fepetra vaovao, indrindra ho fisorohana ny fitangoronan’ny olona ary ny fanodinkodinana an’ireo anjara fanampiana ho an’ny vahoaka.
Hametraka rindran-damina vaovao isam-pokontany ny governemanta, miaraka amin’ny faritra Analamanga sy kaominina Antananarivo renivohitra. Hisy ny fanadihadiana eny ifotony mba hifantenana an’ireo olona tokony hahazo ny fanampiana.
“Hitety tokantrano mihitsy ireo ekipa ireo. Hivoaka ny lisitra, aorian’izay”, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Andriatongarivo Lalatiana, tetsy Anosy, omaly antoandro. Minisitra efatra no nanazava an’izao rindran-damina vaovao mikasika ny hetsika sosialim-bahoaka izao, notronin’ ny governora Rasoamaromaka Hery ary ny ben’ny tanàna, Andriatsitohaina Naina.
Nomarihin’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo fa “hatao ao anatin’ny mangarahara tanteraka ny fizotran’ny fizarana ny fanampiana, manomboka izao”. Aoka isika, hoy izy, hifampitsinjo sy hanaraka ny fandaminana.
Mangarahara sy fifampitsinjovana
Voafaritry ny governemanta mialoha ireo sokajin’olona tokony hisitraka an’ireo fanampiana ireo. “Ankoatra an’ireo fianakaviana marefo dia tokony hahazo ihany koa ireo olona tapaka karama sy ireo tsy afaka manao ny asa fitadiavany amin’ izao fihibohana izao. Misy ihany koa ireo tratran’ny fampiatoana araka asa”, araka ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana, Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien.
Naverina fa tsy ho ao anatin’ ny lisitra vaovao intsony ireo olona efa nahazo teo aloha. Ny karinem-pokontany isan-tokantrano no hanamarinana an’izany. « Mizara roa ny fanampiana: ny Tosika Fameno 100 000 ariary, izay hiditra amin’ny andiany faharoa ary ny Vatsy Tsinjo ahitana vary iray gony sy ireo kojakoja hafa miaraka aminy. Aoka mba hitsinjo ny hafa ireo efa nahazo anjara tamin’izany », hoy indray ny goveroran’ny faritra Analamanga.
Vinavinaina hiverina manomboka amin’ny talata 11 aogositra 2020 ny fizaràna an’ireo fanampiana ireo. Mampanantena amin’ny fanaovana ny ezaka rehetra hahatomombana ny fijerena an’ireo mponina eto an-drenivohitra kosa ny ben’ny tanàna, Andriantsitohaina Naina, sady nanamafy ny fanaraha-maso an’ireo sefo fokontany manao kitoatoa sy kiantranoantrano.
Fandikan-dalàn’ny miaramila :: Mandetika an’ireo mihoa-pefy ny Lehiben’ny Etamazaoro